Ny sidina fiaramanidina SalamAir Muscat mankany Tehran dia sidina faharoa mankany Iran
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Ny sidina fiaramanidina SalamAir Muscat mankany Tehran dia sidina faharoa mankany Iran
Airlines • Airport • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Iran • Oman Vaovao Vaovao • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
SalamAir, seranam-piaramanidina voalohany ao Oman, dia nandefa ny sidina voalohany nankany Tehran, Iran manidina Muscat- Tehran intelo isan-kerinandro
Ity no toerana fahatelo natolotry ny kaompaniam-pitaterana ao anatin'ny iray volana monja, taorian'ny nandefasana sidina nankany Riyadh sy Koety.
Tehran, renivohitr'i Iran dia toerana malaza indrindra any Muscat. Toerana faharoa any Iran mankany SalamAir aorian'i Shiraz. Muscat- Shiraz dia sidina malaza indrindra amin'ny zotram-piaramanidina.
A320 Neo vaovao vaovao izay hiaingantsika avy any Muscat mankany Tehran. Ho fanampin'i Tehran, ny Salam Air dia nandefa serivisy ho an'i Riyadh sy Koety miaraka amin'i Istanbul sy Trabzon any Torkia amin'ny drafitra eo ho eo.